Fentanyl: Drug 50 Times mahery vaika Noho ny herôinina - News Fitsipika
Fentanyl: Drug 50 Times mahery vaika Noho ny herôinina
Of 69 mahafaty overdose niharam-boina tamin'ny taon-dasa, 68% efa naka ny synthetic opioid, izay efa nianatra cartels Meksikana mba hanao sy tsokosoko ny interstate lalambe. Ny zava-mahadomelina 'dia izay mamono ny olom-pirenena,', Hoy ny lehiben'ny polisy Manchester
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Fentanyl: zava-mahadomelina 50 fotoana vaika kokoa noho ny herôinina mitrongy New Hampshire” dia nosoratan'i Susan Zalkind in Manchester, New Hampshire, fa theguardian.com ny alakamisy 4 Febroary 2016 12.30 UTC
Manamboninahitra Shaun voalohany McKennedy overdose antso avy ao amin'ny 6.39pm. Izy mampody ny anjombona tamin'ny ary harefo eo 245 Laurel eny an-dalana, ny midsize efitra trano. Misy zaza intsony kalesy iray eo amin'ny anoloan'ny tokotany. Lehilahy iray manao ny ampakarina ny Chucky lobaka peeps ao an-varavarana ho McKennedy, 24, harefo ambony rihana.
Maro ny olona avy eo an-toerana sy ny departemanta afo EMT departemanta dia efa misy, manomba manodidina toa tsy manana aina ny vatana iray 31 taona, lehilahy eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tany amin'ny hahavonto mando T-shirt sy pataloha jeans. Tena toe-javatra McKennedy, 24, dia efa am-polony ny alalan 'ny fotoana satria dia nanatevin-daharana ny hery tamin'ny Jolay.
"Larry! Larry! Mitoera atỳ aminay!"Yells Justin Chase, ny Manchester EMT medic. Izy injects naloxone, ny fanafody izay mihombo ny vokatry ny opioids, an'i Larry ny orona.
Ny vatany sy ny masony mampihorohoro tsapako mivelatra. "Inona ny malaza?"Hoy izy nanontany, tsy blinking.
Larry manaiky ho any amin'ny efitra vonjy taitra ao amin'ny Elliot Hospital, fa ho herinandro maromaro talohan'ny mamaritra fitsapana vokatra mihitsy no nitarika ny overdose. Io no fotoana voalohany dia ny nanao izay, hoy izy tamin'i McKennedy tatỳ aoriana fa ny alina. Matetika dia injects teo anelanelan'ny roa sy telo grama ny herôinina ny andro; fa ny hariva izy ihany no naka .2 grama, na ny "pensilihazo ny". Dia tsy azo antoka raha overdosed satria very ny fandeferana - Milaza izy fa i hadio ho roa volana mahery kely - na dia nisy Nampiana amin'ny fentanyl.
Araka ny Zava-mahadomelina Fampiharana Administration, fentanyl dia synthetic opioid 100 heny mahery noho ny morphine, ary 30-50 heny mahery noho ny herôinina.
"Fentanyl dia izay mamono ny olom-pirenena,"Hoy Manchester lehiben'ny polisy Nick Willard ao amin'ny fijoroana ho vavolombelona eo anatrehan'i Kongresy tamin'ny herinandro lasa.
Amin'ny 2013, ny tanànan'i Manchester nanana 14 mahafaty overdoses, 7% izay tafiditra niharam-boina amin'ny fentanyl ny rafitra, araka ny Willard. Amin'ny 2015, 69 ny olona faty ilay mpamaly ra overdosed, 68% izay efa nandray fentanyl.
Ny fanjakana intsony antontan'isa ireo falifaly. Manam-pahefana tao amin'ny biraon'ny dokotera ny lehiben'ny mpandinika any New Hampshire milaza fa mbola handray ny valiny avy amin'ny fitiliana 36 ahiana overdoses, fa efa isan'ny 399 mahafaty overdose niharam-boina hatramin'izao, mihoatra noho ny roa ampahatelon'ny izay maty tamin'ny fentanyl ny rafitra.
"Tsy tahaka Mario Batali,"Hoy Willard avy amin'ny biraony tao Manchester, mampitaha herôinina mpivarotra nanapaka ny famatsiana amin'ny malaza lehiben'ny. "Ireo fotsiny ry zalahy ireo manipy azy ao anaty Mixer. Afaka mahazo kitapo izany ary tsy misy olona tonga lafatra dia ho faty avy amin'izy io. Azonao atao ihany koa ny mahazo ny kitapo [izany] mahitsy fentanyl ary izay hamono anao. "
Willard nilaza fa nandritra ny fanafihana vao haingana tao Manchester, dia nahita mpivarotra mampifangaro fentanyl amin'ny whey proteinina. Ao amin'ny iray hafa manindrona izay nitarika mihitsy ny handrombaka fahefana amin'ny Lawrence, Massachusetts, dia lazaina fa ny mpivarotra mampifangaro herôinina sy ny fentanyl tao amin'ny lakozia blender.
Fa amin'ny ankapobeny, Said Willard, ny tantaran'ny opiate ampiasaina amin'ny Manchester manaraka ny lamina mitovy ho toy ny sisa amin'ny firenena. Ny krizy dia hampidirina ao amin'ny fiakaran'ny ny levitra painkillers toy ny OxyContin. Rongony mitady ny mora vidy kokoa matetika ambony niverina ho amin'ny mainka mampidi-doza, nefa be mora kokoa, herôinina.
Ny fiovana lehibe, hoy izy, nitranga tsy ela taorian'ny 2010, rehefa Purdue Farmer nanova ny fanafody mba hanaovana azy kokoa sarotra ny hanova sy hahazo avo. Mpamatsy any Meksika dia haingana ny haharaka ny hihamaro be ny tsena, ary ny rongony in Manchester, izay mipetraka eo akaikin'i Interstate 93, Route 3, Route 81, ary Route 9, dia tsy olana ho nipaipaika ny famatsiana.
Fentanyl 'dia izay mamono ny olom-pirenena', Hoy ny lehiben'ny polisy Manchester. Sary: Alamy
Vao mainka ho Manchester, DEA mpandraharaha Tim Desmond milaza ny faharanitan-tsaina dia midika fa ny Meksikana cartels, Manokana ny Sinaloa El Chapo cartel, Nitombo Poppy famokarana 50% nanomboka tamin'ny taona lasa ary efa lasibatra ny avaratra-atsinanana.
Fentanyl voalohany nitranga tamin'ny taona 1960 ho toy ny ankapobeny fanafody fanadontoana, Ary dia mbola tapaka angoninay dokotera, matetika amin'ny endrika lozenges sy tampina, matetika ny homamiadana marary.
Rongony dia nahita fomba mba hanararaotra ny levitra endriky ny amin'ny zava-mahadomelina, amin'ny alalan'ny mbola minono eo amin'ny tampina, ohatra. Saingy vao haingana, Meksikana cartels Nianatra ny fomba hahatonga ny fentanyl amin'ny fanafarana ny ilaina simika avy any Shina, avy eo an-tsokosoko ny vokatra manerana ny sisin-tany sy teo amin'ny lalambe interstate rafitra, hoy Desmond.
Ny United States dia nanana olana talohan'ny fentanyl. Teo anelanelan'ny 2005 ary 2007, mihoatra ny 1,000 maty ny olona avy amin'ny zava-mahadomelina, ny ankamaroany ao amin'ny Midwest. Araka ny fanambarana an-gazety avy ao amin'ny DEA, maty ireo rehetra mety ho zohina amin'ny laboratoara iray any Meksika. Raha vao ny DEA hanakatona ny laboratoara, ny fentanyl valan'aretina nijanona koa.
Tamin'ity indray mitoraka ity ny manodidina, ny DEA tsy mbola lasibatra laboratoara iray ao Meksika tompon'andraikitra ny areti-mifindra tany Nouvelle-Angleterre, hoy Desmond. Tsy, federaly mpiasa sy ny polisy ao an-toerana no lasibatra faritra mpivarotra. "Indraindray isika dia tsy maintsy manomboka eo amin'ny farany ambany ny sakafo rojo mba hiakatra ny tohatra,"Hoy izy.
In Manchester, Willard dia miasa mba handringana ny valan'aretina hatramin'ny tany ka. Rehefa tonga lehiben'ny tao amin'ny fahavaratra ny tamin'ny taon-dasa, dia niverina izy no mpifehy ny zava-mahadomelina vondrona, ka nanome baiko hisambotra mpivarotra mpitsongodia haingana mba haka azy ireo eny an-dalambe, fa tsy miandry ny fikasana hanao tsara kokoa ny raharaha na ny asa ny famatsian-dalana,.
Izy ihany koa no niasa mba hanorina ny fanjakana sy ny hery asa federaly, antsoina hoe Granite Hammer, izay nanomboka tamin'ny Septambra; hatreto aloha, hoy izy, ny vondrona dia nanao 77 fisamborana. Izy ihany koa niantso ny fiakaran'ny fanohanana ny fanarenana panjakana toeram-pitsaboana.
McKennedy namaly ny roa hafa overdose miantso ny alina. Voalohany dia ny olona tahaka ny tara 20 taona mahery atao hoe Mark, izay nandalo avy ao amin'ny Laundromat iray fanjaitra ao ny sandriny, ary ny iray feno, ary vonona ny handeha. Mark dia tsy vonona ny hiaraka ny EMTs ho any amin'ny hopitaly.
"Moa ve ianao te-ho faty?", Hoy Chase.
"Iza ny fuck no te-hiaina eto amin'ity fiainana ity?"Marka ny fanambarana, Said Chase, dia hamono tena ideation, izay midika fa ny EMTs no takiana mba hitondra azy ho any amin'ny toeram-pitsaboana na izany na tsy. Any amin'ny hopitaly, Mark Nangataka McKennedy ny herôinina indray.
Ny manaraka antso ho an'ny vehivavy 30 taona tany am-boalohany. Dawn Marie overdosed amin'ny namana iray ny efitra. Nila roa fatrany ny naloxone mba hamelona indray azy. Ny namany roa ankizy. Izy ireo nitanisa ny nampihatra ny abidy amin'ny fandokoana boky ao amin'ny efitra manaraka varavarana.
Hafa mpiandry raharaha namaly ny antso overdose fahefatra McKennedy raha nanampy EMTs hanatrika any amin'ny iray andevozin'ny zava-dratsy, izay niezaka ny haka ny ainy amin'ny lakozia antsy. Niaiky izy McKennedy avy teo aloha overdose. "Andro hafa any Paradisa,"Hoy izy araka ny polisy nandeha namaky ny varavarana.
Indray mipi-maso ny tony tsara ny andro, McKennedy nanampy manamboninahitra Mark Aquino amin'ny fifamoivoizana nijanona. Aquino dia zava-mahadomelina fankatoavana manam-pahaizana. Izany dia midika hoe mahazo sarotra kokoa ny mamantatra rongony, hoy izy:. Herôinina dia mora ny mamantatra, ny mpampiasa ny mpianatra mahazo kely sy Pin-tahaka. "Fentanyl tsy mametra mpianatra,"Hoy izy. "Izy ireo fa tsy ataovy mihatohatoka,"Hoy izy nanazava, nandatsaka ny saokany ny tratrany.
amin'ny 10.30, McKennedy niverina ho any amin'ny sampan-draharaha mba hameno antontan-taratasy avy nampamoahana an'i ny antso. Iray hafa "miovaova" fiovan'ny Manchester, dia namarana. "Tsy misy avy amin'ny olon-tsotra."
← Marijuana Enga anie Manisy Ratsy Verbal Memory 10 ny tsara indrindra ho ny fanangonam-bola Apps →